646s Miaramila maoderina V amin&#39;ny Ady Lehibe Faharoa II - Iza no handresy? images and subtitles
Inona no ratsy kokoa eto amin'ity tontolo ity? Eny, eny, ary izay no zombies Nazi, saingy tsara ihany fa tsy niresaka momba ny zombies hazakazaka master isika amin'izao fotoana izao. Nope, fa tsy anio, miatrika ireo zavamananaina sy miaina rivotra, amin'ny fametrahana farany anay iza no handresy? Miaramila maoderina sa amin'ny Ady Lehibe Faharoa II? 1941 io daty io, ary ny ady tany Eropa dia milomano milomano ho an'i Adolf Hitler. Resy i Frantsa, navoakan'i Grande-Bretagne tao amin'ny fanjakan'ny nosy keliny ary manafintohina manohitra ny Sovietika dia fahombiazana mahatalanjona iray hafa. Azo antoka fa amin'ny lohataona ho an'i Hitler- na dia tara aza - ary amin'ny blitzkrieg Faly be ny manampahefana Nazi nijery ny labia miafina nanamboatra ny UFO miovaova hevitra. injeniera amin'ny lozisialy miloko volondriana mena volo manana volo, ary mazava ho azy, fotoana milina haka an-keriny an'i Einstein ary hanery azy hanamboatra baomba nokleary ho an'i Alemana. Manontany tena i Hitler hoe nanorina ny milina fiasa ilay izy iray amin'ireo mpiambina azy hanome andrana fitsapana. "Eh, Hans," hoy i Hitler, "Maninona raha mandalo, omeo ny hoavy mahafinaritra amin'ny fahatelo Reich peek, ary miverena eto ary lazao amiko izay rehetra mahatalanjon'ny Nazi Alemana tamin'ny taona 2020? ” Tsy misy diso fanantenana ny Fuhrer, Hans the Nazi dia miditra ao amin'ny masinina alemà fotoana alemana, ary miaraka amin'ny fanindriana bokotra iray, nanjavona ho rivotra manify izy! Tamin'ny 2020 izy izao, ary nipoitra indray ny smack-dab i Hans Nazi teo afovoan'ny tafika Rammstein base, ny base amerikana farany any Amerika ary lehibe indrindra amin'ny herin'ny NATO any Eropa. Nianjera mivantana tamin'ny miaramila amerikana i Hans, nahatsapa fa tena ratsy tokoa ny ho avy tsy mety, ary izao izy dia efa te-hanandrana ny fiafaran'ny sehatry ny fahalalahana rehefa arahinay i Hans Nazi miaramila amerikana maoderina ary mamantatra hoe iza no handresy. Rava ny fanapahana sy ny fitaovana ataon'ny miaramila tsirairay, ary fantaro amin'ny farany izay ho tonga eo ambony. Rehefa momba ny fiofanana dia ny fitoviana misy eo amin'ny miaramila amerikana maoderina iray sy ny Nazi be ny miaramila. Niditra tao amin'ny fampiofanana fototra ny miaramila Nazi izay manana fahalalàna momba ny basy ary na dia ny tetika vitsivitsy zazakely aza dia noho ny fihanaky ny Tanora Hitler tany Alemana Nazi. Nanentana be ny zazalahy handray anjara tamin'ny tanora Hitler tamin'ny 14 taona, programa nasionalista izany dia toy ny Boy Scouts any Etazonia- ka tsy nisy afa-tsy zavatra lehibe kokoa amin'ny avonavom-pirenena, mankahala ny Jiosy ary mianatra miady. Notarihin'ireo vazaha ny ady lehibe eran'izao tontolo izao, dia natanjaka ny hatezerana noho ny fahaverezan'i Alemana taranaka, ary i Hitler tsy adala- dia nandany taona maro nanomanana ireo ankizilahy tanora Alemanina izy mba ho miaramila. Tsy dia misy programa toy izany i Amerika maoderina, ary ny ankamaroany amin'ireo tafika dia avy amin'ny a mahazatra, fiaviana sivily. Vantany vao niditra ny fanofanana miaramila dia mitovy ny fiofanana amin'ny roa tonta. Miaramila miaramila iray nazi no miaritra 16 herinandro fiofanana mialoha alohan'ny handefasana azy ireo any amin'ny efitranony hahazo fiofanana fanampiny izy ireo. Ny miaramila amerikana maoderina kanefa, dia hiharan'ny fanofanana 8 herinandro hitodihany azy avy tamina sivily ho miaramila iray, ary iray volana fanampiny ny sekoly zazakely ampianaro azy ny fomba hanjaka amin'ny ady rehetra. Ny miaramila Nazi dia nanana fiofanana tsara, rehetra nanodidina, sy ny tombotsoan'ireo vazaha eran'izao tontolo izao mianatra avy. Tsy toy ny firenen-kafa ny miaramila Nazi koa nahazo fiofanana mahazatra tamin'ny fitaovam-piadiana hafa dia mety miraikitra amin'ny atiny, indrindra ny basy masinina. Ny fanatanjahantena amerikana maoderina dia manome taratra ity modely ity, ary ny zazalahy zazalahy amerikana dia tsy mahazatra fotsiny miaraka amin'ny fitaovam-piadiana rehetra izay mety ho entin'izy ireo ny platonony, nefa matetika dia tsy maintsy mahafeno fepetra amin'ny maro amin'izy ireo manaporofo ny fahaizany. Amin'ny lafiny rehetra, ny miaramila amerikana maoderina dia manana traikefa lavitra noho ny Nazi iray talohan'ny fahirano miaramila nandao ny fampiofanana voalohany, ary raha ireo mpiofana Nazi kosa nahazo tombony tamin'ny Ady Lehibe Faharoa Izaho veterana, miaramila amerikana maoderina no mahazo tombony amin'ireo mpampiofana mpiofana izay efa nandany fitsangantsanganana marobe tamin'ny fifandonana tao Afghanistan sy Iraq. Na izany aza, ny miaramila Nazi dia nahazo tombony amin'ny fifehezana faran'izay lehibe kokoa, ary a efa zatra ny manampahefana miaramila izay nanomboka tamin'ny taonany teo amin'ny Tanora Hitler. Rehefa misy fiofanana dia hiantso izany isika, na eo amin'ny andaniny roa, fa ny miaramila Nazi ary ny taonany feno fanatanjahantena nolaniany tamin'ny Tanora Hitler dia hahatratra ny amerikanina miaramila rehefa tonga ny Fitness sy ny finiavana hiady. Amin'ny fiadiana amin'ny tanana dia hahazo bebe kokoa, ary fampiofanana tsara kokoa ny miaramila amerikana fa ny miaramila Nazi. Ny miaramila Nazi dia afaka nanantena ny hianatra ny fomba fiasa sy tanana momba ny ady totohondry, fa maoderina Ny miaramila amerikana efa an-taonany maro no nianatra teknika kanto mifangaro. Fandaharam-peo masiaka henjana sy tapa-kevitra, tamin'ny fiandohan'ny taona 2000 ny tafika amerikana manontolo Ny fandaharam-pirazanana ho an'ny martial dia tsy maintsy nifantoka indray noho ny tsy fahampian'ny fiofanana amin'ny fameperana tsy misy mahafaty teknika. Rehefa tonga amin'ny ady atao hifanome tànana, ny miaramila amerikana dia mitanisa an-tampony, misaotra an-jatony ny traikefa sy ny fivoaran'ny fiofanana ara-tafika. Samy manana safidy hafa azon'izy ireo ireo roa ireo afa-tsy ny totohondry tsy misy arakaraka lalao, nifamadika haingana tamin'ireny fitaovana fanindroany ireny ireo mpiady hiatrehana fandresena. Ny miaramila Nazià dia nitondra ny antsy / bayonet ny seitengewehr 98. Ahitana fehin-kibo saika 15 santimetatra, io antsy mahafaty io dia azo ampifamatotra eo anoloana ny basy ho toy ny bayonet. Matetika ny miaramila amerikana dia mitondra antsy ihany koa, fa ny ankamaroan'ny kisarisary dia ny fanakanana amerikana fitaovana, na e-fitaovana ho fohy. Fehiloha miforitra manana sisiny mahavariana dia ahafahan'ny miaramila amerikana haingana haingana mihantaha toerana hiadiana amin'ny tany rehetra, fa miasa ihany koa amin'ny asan'ny tanana fitaovam-piadiana. Ny fitsinganana tokana avy amin'ny e-fitaovana dia ampy hampisaraka ny karandohan'ny fahavalo hisokatra, na hanaterana izany aza sakantsakan-doha nikotrika tamin'ny fiarovan-doha fiarovana. Noho ny tombony miharihary amin'ny fitaovam-piadiana fohy kely sy ny fitaovam-piadiana toy ny famaky dia mihetsika izahay zara raha omena ny amerikanina miaramila ny fandresena eto fotsiny satria tsy toy ny Nazi antsy, ny e-fitaovana amerikana koa dia azo ampiasaina saika mihady toerana fiadiana, manome fampiasa betsaka amin'ny toe-javatra miady izany. Tamin'ny fotoana akaiky, ny miaramila Nazi dia nitondra an'i Walther P38 mahavelona, ​​pistol iray izay lasa malaza rehefa nitady azy ireo ho toy ny fanomezana ady ny miaramila Allied. Mahagaga fa ny P38 dia mbola ampiasaina eran'izao tontolo izao, ao Afghanistan izay misy ny tafika mpikomy dia nampiasaina tsy tapaka tamin'ny tafika NATO. Ny fahazoana bala 9mm, ny P38 dia manana halavam-potoana 50 metatra, ary marina tsara hanana fivelarana mahomby mitifitra 25-50 metatra. Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha mirefy 320 metatra isan-tsegondra, ny P38 dia nanana hery famaranana mahavariana ny habeny kely. Miaraka amin'ny magazine 8 manodidina fotsiny, tsy afaka namela miaramila Nazi ny P38 mihazona afo amina lasibatra mandritra ny fotoana maharitra, fa tsy miankina amin'ny fahitsiana fa tsy ny volan'ny afo. Ny miaramila amerikana dia manisa ny P38 Nazi miaraka amin'ny Beretta M9. Ny tena ankafizan'ny lalao Resident Evil, ny M9 dia efa nanompo hatramin'ny taona 1980. Fitaovam-piadiana tena azo antoka, ny M9 dia mamehy ny boribory 9mm miaraka amina gazety 15 boribory, manome ny miaramila mavesatra ho antsika izay manana fahaiza-mitifitra lehibe kokoa alohan'ny mila mamerina miverina Ny fitaovam-piadiana dia manana ny hafainganam-pandeha mijaly 381 metatra isan-tsegondra, ka manome tombony lehibe kokoa noho ny Nazi P38, ary nanana fitifirana avo roa heny mahery indroa ny fitaovam-piadiana Nazi, tamin'ny 100 metatra sy 50 metatra ho an'ny habaka mahomby indrindra. Miara-droa avo roa heny sy fahombiazana mitifitra, ary saika avo roa heny ny fahaizany mandresy eto dia mandeha amin'ny miaramila maoderina amerikana sy ny M9 matoky azy. Ho an'ny fiaraha-mientana amin'ny haino aman-jery sy lavitra dia mitondra ny Karabiner 98k ny fenitra mahazatra famoahana basy ny tafika alemà tamin'ny Ady Lehibe Faharoa. Ny basy vita amin'ny ady izay tena azo antoka, ny K98k dia nahita hetsika teny amin'ny kianja avy any Afrika ka hatrany ny atsinanana atsinanana, ary miasa ao anaty fotaka sy orana toy ny ranomandry sy ranomandry. Ny fitaovam-piadiana dia ahitana boribory 7.92 mm izay mety hanimba fahasimbana raha nahatratra lasibatra lasibatra noho ny habeny sy ny hafainganam-pandehan'ny 760 metatra ny segondra. Ny basy dia nanana fitifirana mahomby 500 metatra misy zezika vy, na dia mety aza izany mbola mamoaka afo marina hatramin'ny 1.000 metatra miaraka amin'ny fahitana teleskopika. Ny halavany farany dia 4,700 metatra dia midika fa na dia lavitra ny basy aza ny basy tsy marina, fa mbola mety maty raha sendra nisy tifitra tonga teo am-pandeha. Mampalahelo fa ny basy no voafetra tamin'ny alàlan'ny 5 boribory, tsy manome fahaiza-manao izany hanafoana tanjona. Fa kosa, ny zazalahy alemà dia niantehitra tamin'ny fahamarinana, ary ny basy milina miaraka aminy, mba tsy hiandany hery ny fahavalo. Ny miaramila amerikanina dia mitondra an'i M4 Carbine matoky azy amin'ity ady ity. Na eo aza ny tsaho mifanohitra, ny M4 dia manao soa aman-tsara amin'ny karazana tontolo maro, sy izay rehetra tsy maintsy nampiasa iray teo amin'ny saha- fa tsy ny namaky izany tamin'ny Internet lahatsoratra- dia mahafantatra fa ny basy dia tsy misy olana mitifitra na dia voagefon'ny maloto sy grime aza. Raha miakatra kely fotsiny ny basy, dia mijanona amin'ny herin'aratra izy io satria mihodina 5.56 tao amin'ny gazety boribory telopolo izay efa ela no nantsoin'ny mpamily azy satria tsy nanolotra herinaratra faobe ho famonoana fihodinana voalohany. Na izany aza, ny hafainganam-pandehany mirefy 910 metatra ny faharoa mitambatra amin'ny munition misy vy manome fiasa lehibe amin'ny fiadiana amin'ny vatana. Ny haavony mandaitra mahomby indrindra 500 metatra ho an'ny tanjona iray, ary 600 metatra ho an'ny laharana kendrena omeo ezaka mahatratra. Ankoatr'izay, ny M4 dia manolotra fahaizana mifantina mirehitra, mamela ny mpampiasa azy handoro afo tokana fihodinana mandritra ny afo marina lavitra, na fipoahana 3 manodidina ho an'ny ady akaiky. Rehefa mifandanja, dia mifamatotra ireo basy roa ireo miaraka amin'ny manana fiasa mahomby indrindra ho an'ny kendrena teboka na sahanan'ny olona 500 metatra mampiasa fijery vy. Ny miaramila antsika dia tsy hiady lavitra lavitra noho ny an'ny tsirairay avy, na izany aza ankoatr'izay dia tsy misy dikany izany ary sarotra ny hahita ny lasibatrao. Ny K98k dia manantona ny M-4 miaraka amin'ny fihodinana lehibe kokoa izay hanimba azy akaiky na amin'ny antonony. Saingy, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha ambany kokoa noho ny M-4, ny fahabangan'ity fihodinana lehibe ity mihena tsinontsinona ny tsy maintsy alehany- hatrany amin'ny toerana misy ny voalohany na roa tifitra dia ho ajanona mora foana amin'ny fitaovam-piadiana mahazatra mahazatra entin'ny zaza amerikana amin'ny be ny isan-karazany. Amin'ny alàlan'ny fampitahana, ny fahaiza-manao lehibe kokoa ary ny taham-pipoahana haingana kokoa ny M-4 manome Ny tafika amerikana maoderina dia tombony tsy mifanandrify amin'ny ady amin'ny afo, ary koa ny fahaizana mifamadika amin'ny afo 3 mipoaka ho an'ny ady totohondry akaiky. Mahavita mandefa fihodinana mahatsiravina telo miaraka amina tahony iray dia midika fa eo akaikin'ny M4 dia manao trompetra ny K98k, saingy amin'ny haben'ny magazine sy ny fitifirana avoakan'ny M-4 dia ho avy eny an-tampony amin'ny antonony manelanelana lava ihany koa. Raha ny miaramila Nazi dia tonga tamin'ny fotoana nandehanana tamin'ny fahitana teleskopika, na dia Amerikanina aza izahay infantryman dia nanakaiky ny halavirana haingana, satria ny K98k afaka mitondra marina afo manelanelana ny M4 tsy afaka manantena hikasika. Manakaiky ny elanelan-jotra, manome ny fandresen'ny miaramila amerikana maoderina isika. Saingy amin'ny elanelana lava be dia be, ny fandresena dia mankamin'ny miaramila Nazi sy ny fahaizany manantona sy hikasika olona hatramin'ny 1000 metatra miala tsara. Farany, manana tombony ara-batana ara-batana sy ara-tsaina ny fitsidihanay ny dianay manao dia lavitra nandritra ny taonany dia nandany tamin'ny fandaharam-piofanana nasionalista Hitler Tanora, ary nanana tombony tao anaty afo lavitra be dia be ny fahazoana marim-pototra sy ireo karazana basy K98k. Saingy amin'ny faritra hafa rehetra dia manjaka ny miaramila amerikana maoderina, isaorana ny fivoarana amin'ny fandaharam-panofanana nandritra ny 80 taona lasa ary nanatsara ny fitaovana maoderina. Angamba tsy mitovy hevitra ianao na- iza amin'ireo roa heverinao fa mety handresy amin'ny iray tokana miady amin'ny fahafatesana? Ampahafantaro anay ao amin'ny fanehoan-kevitra, ary ankehitriny fa amin'ny faran'ny farany ianao, maninona raha mitandrina hatrany fety mandeha amin'ny fipihana ilay horonan-tsary eto, na angamba aleonao hijery ity iray ity eto fa tsy ?! Mandehana haingana ary tsindrio ny iray, tsy sahala amin'ireo mpiady aminay ankehitriny - tsy ho very ianao!
Miaramila maoderina V amin&#39;ny Ady Lehibe Faharoa II - Iza no handresy?
< start="0.329" dur="3.271"> Inona no ratsy kokoa eto amin'ity tontolo ity? >
< start="3.6" dur="5.32"> Eny, eny, ary izay no zombies Nazi, saingy tsara ihany fa tsy niresaka momba ny zombies hazakazaka master isika >
< start="8.92" dur="1"> amin'izao fotoana izao. >
< start="9.92" dur="3.36"> Nope, fa tsy anio, miatrika ireo zavamananaina sy miaina rivotra, amin'ny fametrahana farany anay >
< start="13.28" dur="1"> iza no handresy? >
< start="14.28" dur="2.91"> Miaramila maoderina sa amin'ny Ady Lehibe Faharoa II? >
< start="17.19" dur="4.36"> 1941 io daty io, ary ny ady tany Eropa dia milomano milomano ho an'i Adolf Hitler. >
< start="21.55" dur="4.27"> Resy i Frantsa, navoakan'i Grande-Bretagne tao amin'ny fanjakan'ny nosy keliny ary manafintohina >
< start="25.82" dur="3.31"> manohitra ny Sovietika dia fahombiazana mahatalanjona iray hafa. >
< start="29.13" dur="4.24"> Azo antoka fa amin'ny lohataona ho an'i Hitler- na dia tara aza - ary amin'ny blitzkrieg >
< start="33.37" dur="5.17"> Faly be ny manampahefana Nazi nijery ny labia miafina nanamboatra ny UFO miovaova hevitra. >
< start="38.54" dur="4.47"> injeniera amin'ny lozisialy miloko volondriana mena volo manana volo, ary mazava ho azy, fotoana >
< start="43.01" dur="4.25"> milina haka an-keriny an'i Einstein ary hanery azy hanamboatra baomba nokleary ho an'i Alemana. >
< start="47.26" dur="4.37"> Manontany tena i Hitler hoe nanorina ny milina fiasa ilay izy >
< start="51.63" dur="1.94"> iray amin'ireo mpiambina azy hanome andrana fitsapana. >
< start="53.57" dur="3.64"> "Eh, Hans," hoy i Hitler, "Maninona raha mandalo, omeo ny hoavy mahafinaritra amin'ny fahatelo >
< start="57.21" dur="3.8"> Reich peek, ary miverena eto ary lazao amiko izay rehetra mahatalanjon'ny Nazi Alemana >
< start="61.01" dur="1.65"> tamin'ny taona 2020? ” >
< start="62.66" dur="4.3"> Tsy misy diso fanantenana ny Fuhrer, Hans the Nazi dia miditra ao amin'ny masinina alemà fotoana alemana, ary >
< start="66.96" dur="2.74"> miaraka amin'ny fanindriana bokotra iray, nanjavona ho rivotra manify izy! >
< start="69.7" dur="5.43"> Tamin'ny 2020 izy izao, ary nipoitra indray ny smack-dab i Hans Nazi teo afovoan'ny tafika Rammstein >
< start="75.13" dur="5.03"> base, ny base amerikana farany any Amerika ary lehibe indrindra amin'ny herin'ny NATO any Eropa. >
< start="80.16" dur="4.68"> Nianjera mivantana tamin'ny miaramila amerikana i Hans, nahatsapa fa tena ratsy tokoa ny ho avy >
< start="84.84" dur="5.17"> tsy mety, ary izao izy dia efa te-hanandrana ny fiafaran'ny sehatry ny fahalalahana rehefa arahinay i Hans Nazi >
< start="90.01" dur="3.1"> miaramila amerikana maoderina ary mamantatra hoe iza no handresy. >
< start="93.11" dur="4.14"> Rava ny fanapahana sy ny fitaovana ataon'ny miaramila tsirairay, >
< start="97.25" dur="2.62"> ary fantaro amin'ny farany izay ho tonga eo ambony. >
< start="99.87" dur="4.26"> Rehefa momba ny fiofanana dia ny fitoviana misy eo amin'ny miaramila amerikana maoderina iray sy ny Nazi >
< start="104.13" dur="1.01"> be ny miaramila. >
< start="105.14" dur="4.269"> Niditra tao amin'ny fampiofanana fototra ny miaramila Nazi izay manana fahalalàna momba ny basy >
< start="109.409" dur="5.121"> ary na dia ny tetika vitsivitsy zazakely aza dia noho ny fihanaky ny Tanora Hitler tany Alemana Nazi. >
< start="114.53" dur="5.06"> Nanentana be ny zazalahy handray anjara tamin'ny tanora Hitler tamin'ny 14 taona, programa nasionalista >
< start="119.59" dur="4.19"> izany dia toy ny Boy Scouts any Etazonia- ka tsy nisy afa-tsy zavatra lehibe kokoa >
< start="123.78" dur="3.19"> amin'ny avonavom-pirenena, mankahala ny Jiosy ary mianatra miady. >
< start="126.97" dur="4.48"> Notarihin'ireo vazaha ny ady lehibe eran'izao tontolo izao, dia natanjaka ny hatezerana noho ny fahaverezan'i Alemana >
< start="131.45" dur="5.03"> taranaka, ary i Hitler tsy adala- dia nandany taona maro nanomanana ireo ankizilahy tanora Alemanina izy >
< start="136.48" dur="1.66"> mba ho miaramila. >
< start="138.14" dur="4.55"> Tsy dia misy programa toy izany i Amerika maoderina, ary ny ankamaroany amin'ireo tafika dia avy amin'ny a >
< start="142.69" dur="1.57"> mahazatra, fiaviana sivily. >
< start="144.26" dur="3.9"> Vantany vao niditra ny fanofanana miaramila dia mitovy ny fiofanana amin'ny roa tonta. >
< start="148.16" dur="4.56"> Miaramila miaramila iray nazi no miaritra 16 herinandro fiofanana mialoha alohan'ny handefasana azy ireo any amin'ny efitranony >
< start="152.72" dur="1.73"> hahazo fiofanana fanampiny izy ireo. >
< start="154.45" dur="3.81"> Ny miaramila amerikana maoderina kanefa, dia hiharan'ny fanofanana 8 herinandro hitodihany azy >
< start="158.26" dur="4.74"> avy tamina sivily ho miaramila iray, ary iray volana fanampiny ny sekoly zazakely >
< start="163" dur="2.53"> ampianaro azy ny fomba hanjaka amin'ny ady rehetra. >
< start="165.53" dur="5.039"> Ny miaramila Nazi dia nanana fiofanana tsara, rehetra nanodidina, sy ny tombotsoan'ireo vazaha eran'izao tontolo izao >
< start="170.569" dur="1.181"> mianatra avy. >
< start="171.75" dur="4.48"> Tsy toy ny firenen-kafa ny miaramila Nazi koa nahazo fiofanana mahazatra tamin'ny fitaovam-piadiana hafa >
< start="176.23" dur="3.25"> dia mety miraikitra amin'ny atiny, indrindra ny basy masinina. >
< start="179.48" dur="4.79"> Ny fanatanjahantena amerikana maoderina dia manome taratra ity modely ity, ary ny zazalahy zazalahy amerikana dia tsy mahazatra fotsiny >
< start="184.27" dur="4.21"> miaraka amin'ny fitaovam-piadiana rehetra izay mety ho entin'izy ireo ny platonony, nefa matetika dia tsy maintsy mahafeno fepetra amin'ny maro amin'izy ireo >
< start="188.48" dur="1.08"> manaporofo ny fahaizany. >
< start="189.56" dur="5.25"> Amin'ny lafiny rehetra, ny miaramila amerikana maoderina dia manana traikefa lavitra noho ny Nazi iray talohan'ny fahirano >
< start="194.81" dur="4.31"> miaramila nandao ny fampiofanana voalohany, ary raha ireo mpiofana Nazi kosa nahazo tombony tamin'ny Ady Lehibe Faharoa >
< start="199.12" dur="4.03"> Izaho veterana, miaramila amerikana maoderina no mahazo tombony amin'ireo mpampiofana mpiofana izay efa nandany >
< start="203.15" dur="3.02"> fitsangantsanganana marobe tamin'ny fifandonana tao Afghanistan sy Iraq. >
< start="206.17" dur="4.211"> Na izany aza, ny miaramila Nazi dia nahazo tombony amin'ny fifehezana faran'izay lehibe kokoa, ary a >
< start="210.381" dur="4.619"> efa zatra ny manampahefana miaramila izay nanomboka tamin'ny taonany teo amin'ny Tanora Hitler. >
< start="215" dur="4.04"> Rehefa misy fiofanana dia hiantso izany isika, na eo amin'ny andaniny roa, fa ny miaramila Nazi >
< start="219.04" dur="4.41"> ary ny taonany feno fanatanjahantena nolaniany tamin'ny Tanora Hitler dia hahatratra ny amerikanina >
< start="223.45" dur="2.71"> miaramila rehefa tonga ny Fitness sy ny finiavana hiady. >
< start="226.16" dur="4.56"> Amin'ny fiadiana amin'ny tanana dia hahazo bebe kokoa, ary fampiofanana tsara kokoa ny miaramila amerikana >
< start="230.72" dur="1.48"> fa ny miaramila Nazi. >
< start="232.2" dur="4.21"> Ny miaramila Nazi dia afaka nanantena ny hianatra ny fomba fiasa sy tanana momba ny ady totohondry, fa maoderina >
< start="236.41" dur="3.94"> Ny miaramila amerikana efa an-taonany maro no nianatra teknika kanto mifangaro. >
< start="240.35" dur="5.04"> Fandaharam-peo masiaka henjana sy tapa-kevitra, tamin'ny fiandohan'ny taona 2000 ny tafika amerikana manontolo >
< start="245.39" dur="5.179"> Ny fandaharam-pirazanana ho an'ny martial dia tsy maintsy nifantoka indray noho ny tsy fahampian'ny fiofanana amin'ny fameperana tsy misy mahafaty >
< start="250.569" dur="1"> teknika. >
< start="251.569" dur="3.911"> Rehefa tonga amin'ny ady atao hifanome tànana, ny miaramila amerikana dia mitanisa an-tampony, misaotra >
< start="255.48" dur="3.619"> an-jatony ny traikefa sy ny fivoaran'ny fiofanana ara-tafika. >
< start="259.099" dur="4.581"> Samy manana safidy hafa azon'izy ireo ireo roa ireo afa-tsy ny totohondry tsy misy arakaraka >
< start="263.68" dur="4.419"> lalao, nifamadika haingana tamin'ireny fitaovana fanindroany ireny ireo mpiady hiatrehana fandresena. >
< start="268.099" dur="4.111"> Ny miaramila Nazià dia nitondra ny antsy / bayonet ny seitengewehr 98. >
< start="272.21" dur="4.01"> Ahitana fehin-kibo saika 15 santimetatra, io antsy mahafaty io dia azo ampifamatotra eo anoloana >
< start="276.22" dur="1.749"> ny basy ho toy ny bayonet. >
< start="277.969" dur="4.44"> Matetika ny miaramila amerikana dia mitondra antsy ihany koa, fa ny ankamaroan'ny kisarisary dia ny fanakanana amerikana >
< start="282.409" dur="1.69"> fitaovana, na e-fitaovana ho fohy. >
< start="284.099" dur="5.011"> Fehiloha miforitra manana sisiny mahavariana dia ahafahan'ny miaramila amerikana haingana haingana >
< start="289.11" dur="5.07"> mihantaha toerana hiadiana amin'ny tany rehetra, fa miasa ihany koa amin'ny asan'ny tanana >
< start="294.18" dur="1"> fitaovam-piadiana. >
< start="295.18" dur="3.93"> Ny fitsinganana tokana avy amin'ny e-fitaovana dia ampy hampisaraka ny karandohan'ny fahavalo hisokatra, na hanaterana izany aza >
< start="299.11" dur="3.229"> sakantsakan-doha nikotrika tamin'ny fiarovan-doha fiarovana. >
< start="302.339" dur="4.63"> Noho ny tombony miharihary amin'ny fitaovam-piadiana fohy kely sy ny fitaovam-piadiana toy ny famaky dia mihetsika izahay >
< start="306.969" dur="4.95"> zara raha omena ny amerikanina miaramila ny fandresena eto fotsiny satria tsy toy ny Nazi >
< start="311.919" dur="4.15"> antsy, ny e-fitaovana amerikana koa dia azo ampiasaina saika mihady toerana fiadiana, manome >
< start="316.069" dur="2.84"> fampiasa betsaka amin'ny toe-javatra miady izany. >
< start="318.909" dur="5.4"> Tamin'ny fotoana akaiky, ny miaramila Nazi dia nitondra an'i Walther P38 mahavelona, ​​pistol iray izay lasa malaza >
< start="324.309" dur="3.461"> rehefa nitady azy ireo ho toy ny fanomezana ady ny miaramila Allied. >
< start="327.77" dur="4.269"> Mahagaga fa ny P38 dia mbola ampiasaina eran'izao tontolo izao, ao Afghanistan izay misy >
< start="332.039" dur="3.59"> ny tafika mpikomy dia nampiasaina tsy tapaka tamin'ny tafika NATO. >
< start="335.629" dur="4.801"> Ny fahazoana bala 9mm, ny P38 dia manana halavam-potoana 50 metatra, ary marina tsara >
< start="340.43" dur="3.43"> hanana fivelarana mahomby mitifitra 25-50 metatra. >
< start="343.86" dur="5.33"> Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha mirefy 320 metatra isan-tsegondra, ny P38 dia nanana hery famaranana mahavariana >
< start="349.19" dur="1.279"> ny habeny kely. >
< start="350.469" dur="4.521"> Miaraka amin'ny magazine 8 manodidina fotsiny, tsy afaka namela miaramila Nazi ny P38 >
< start="354.99" dur="5.399"> mihazona afo amina lasibatra mandritra ny fotoana maharitra, fa tsy miankina amin'ny fahitsiana fa tsy ny volan'ny >
< start="360.389" dur="1"> afo. >
< start="361.389" dur="3.691"> Ny miaramila amerikana dia manisa ny P38 Nazi miaraka amin'ny Beretta M9. >
< start="365.08" dur="5.079"> Ny tena ankafizan'ny lalao Resident Evil, ny M9 dia efa nanompo hatramin'ny taona 1980. >
< start="370.159" dur="5.48"> Fitaovam-piadiana tena azo antoka, ny M9 dia mamehy ny boribory 9mm miaraka amina gazety 15 boribory, manome >
< start="375.639" dur="3.691"> ny miaramila mavesatra ho antsika izay manana fahaiza-mitifitra lehibe kokoa alohan'ny mila mamerina miverina >
< start="379.33" dur="5.199"> Ny fitaovam-piadiana dia manana ny hafainganam-pandeha mijaly 381 metatra isan-tsegondra, ka manome tombony lehibe kokoa >
< start="384.529" dur="5.85"> noho ny Nazi P38, ary nanana fitifirana avo roa heny mahery indroa ny fitaovam-piadiana Nazi, tamin'ny 100 >
< start="390.379" dur="3.051"> metatra sy 50 metatra ho an'ny habaka mahomby indrindra. >
< start="393.43" dur="4.34"> Miara-droa avo roa heny sy fahombiazana mitifitra, ary saika avo roa heny ny fahaizany >
< start="397.77" dur="4.289"> mandresy eto dia mandeha amin'ny miaramila maoderina amerikana sy ny M9 matoky azy. >
< start="402.059" dur="5.381"> Ho an'ny fiaraha-mientana amin'ny haino aman-jery sy lavitra dia mitondra ny Karabiner 98k ny fenitra mahazatra >
< start="407.44" dur="2.9"> famoahana basy ny tafika alemà tamin'ny Ady Lehibe Faharoa. >
< start="410.34" dur="5.309"> Ny basy vita amin'ny ady izay tena azo antoka, ny K98k dia nahita hetsika teny amin'ny kianja avy any Afrika ka hatrany >
< start="415.649" dur="5.04"> ny atsinanana atsinanana, ary miasa ao anaty fotaka sy orana toy ny ranomandry sy ranomandry. >
< start="420.689" dur="5"> Ny fitaovam-piadiana dia ahitana boribory 7.92 mm izay mety hanimba fahasimbana raha >
< start="425.689" dur="4.591"> nahatratra lasibatra lasibatra noho ny habeny sy ny hafainganam-pandehan'ny 760 metatra ny segondra. >
< start="430.28" dur="4.219"> Ny basy dia nanana fitifirana mahomby 500 metatra misy zezika vy, na dia mety aza izany >
< start="434.499" dur="4.051"> mbola mamoaka afo marina hatramin'ny 1.000 metatra miaraka amin'ny fahitana teleskopika. >
< start="438.55" dur="4.959"> Ny halavany farany dia 4,700 metatra dia midika fa na dia lavitra ny basy aza ny basy >
< start="443.509" dur="4.53"> tsy marina, fa mbola mety maty raha sendra nisy tifitra tonga teo am-pandeha. >
< start="448.039" dur="4.74"> Mampalahelo fa ny basy no voafetra tamin'ny alàlan'ny 5 boribory, tsy manome fahaiza-manao izany >
< start="452.779" dur="1.47"> hanafoana tanjona. >
< start="454.249" dur="4.72"> Fa kosa, ny zazalahy alemà dia niantehitra tamin'ny fahamarinana, ary ny basy milina miaraka aminy, mba tsy hiandany >
< start="458.969" dur="1.23"> hery ny fahavalo. >
< start="460.199" dur="3.55"> Ny miaramila amerikanina dia mitondra an'i M4 Carbine matoky azy amin'ity ady ity. >
< start="463.749" dur="4.88"> Na eo aza ny tsaho mifanohitra, ny M4 dia manao soa aman-tsara amin'ny karazana tontolo maro, >
< start="468.629" dur="4.57"> sy izay rehetra tsy maintsy nampiasa iray teo amin'ny saha- fa tsy ny namaky izany tamin'ny Internet >
< start="473.199" dur="5.25"> lahatsoratra- dia mahafantatra fa ny basy dia tsy misy olana mitifitra na dia voagefon'ny maloto sy grime aza. >
< start="478.449" dur="4.62"> Raha miakatra kely fotsiny ny basy, dia mijanona amin'ny herin'aratra izy io satria mihodina 5.56 >
< start="483.069" dur="4.71"> tao amin'ny gazety boribory telopolo izay efa ela no nantsoin'ny mpamily azy >
< start="487.779" dur="3.36"> satria tsy nanolotra herinaratra faobe ho famonoana fihodinana voalohany. >
< start="491.139" dur="5.721"> Na izany aza, ny hafainganam-pandehany mirefy 910 metatra ny faharoa mitambatra amin'ny munition misy vy >
< start="496.86" dur="2.759"> manome fiasa lehibe amin'ny fiadiana amin'ny vatana. >
< start="499.619" dur="5.44"> Ny haavony mandaitra mahomby indrindra 500 metatra ho an'ny tanjona iray, ary 600 metatra ho an'ny laharana >
< start="505.059" dur="2.181"> kendrena omeo ezaka mahatratra. >
< start="507.24" dur="4.509"> Ankoatr'izay, ny M4 dia manolotra fahaizana mifantina mirehitra, mamela ny mpampiasa azy handoro afo tokana >
< start="511.749" dur="4.931"> fihodinana mandritra ny afo marina lavitra, na fipoahana 3 manodidina ho an'ny ady akaiky. >
< start="516.68" dur="4.31"> Rehefa mifandanja, dia mifamatotra ireo basy roa ireo miaraka amin'ny manana fiasa mahomby indrindra >
< start="520.99" dur="4.96"> ho an'ny kendrena teboka na sahanan'ny olona 500 metatra mampiasa fijery vy. >
< start="525.95" dur="3.76"> Ny miaramila antsika dia tsy hiady lavitra lavitra noho ny an'ny tsirairay avy, na izany aza >
< start="529.71" dur="4.17"> ankoatr'izay dia tsy misy dikany izany ary sarotra ny hahita ny lasibatrao. >
< start="533.88" dur="5.01"> Ny K98k dia manantona ny M-4 miaraka amin'ny fihodinana lehibe kokoa izay hanimba azy akaiky >
< start="538.89" dur="1.19"> na amin'ny antonony. >
< start="540.08" dur="4.36"> Saingy, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha ambany kokoa noho ny M-4, ny fahabangan'ity fihodinana lehibe ity >
< start="544.44" dur="4.21"> mihena tsinontsinona ny tsy maintsy alehany- hatrany amin'ny toerana misy ny voalohany na >
< start="548.65" dur="4.68"> roa tifitra dia ho ajanona mora foana amin'ny fitaovam-piadiana mahazatra mahazatra entin'ny zaza amerikana amin'ny >
< start="553.33" dur="1.2"> be ny isan-karazany. >
< start="554.53" dur="4.47"> Amin'ny alàlan'ny fampitahana, ny fahaiza-manao lehibe kokoa ary ny taham-pipoahana haingana kokoa ny M-4 manome >
< start="559" dur="4.41"> Ny tafika amerikana maoderina dia tombony tsy mifanandrify amin'ny ady amin'ny afo, ary koa ny fahaizana >
< start="563.41" dur="2.98"> mifamadika amin'ny afo 3 mipoaka ho an'ny ady totohondry akaiky. >
< start="566.39" dur="4.49"> Mahavita mandefa fihodinana mahatsiravina telo miaraka amina tahony iray dia midika fa eo akaikin'ny >
< start="570.88" dur="5.33"> M4 dia manao trompetra ny K98k, saingy amin'ny haben'ny magazine sy ny fitifirana avoakan'ny M-4 dia ho avy >
< start="576.21" dur="2.98"> eny an-tampony amin'ny antonony manelanelana lava ihany koa. >
< start="579.19" dur="4.54"> Raha ny miaramila Nazi dia tonga tamin'ny fotoana nandehanana tamin'ny fahitana teleskopika, na dia Amerikanina aza izahay >
< start="583.73" dur="4.13"> infantryman dia nanakaiky ny halavirana haingana, satria ny K98k afaka mitondra marina >
< start="587.86" dur="2.83"> afo manelanelana ny M4 tsy afaka manantena hikasika. >
< start="590.69" dur="4.02"> Manakaiky ny elanelan-jotra, manome ny fandresen'ny miaramila amerikana maoderina isika. >
< start="594.71" dur="4.59"> Saingy amin'ny elanelana lava be dia be, ny fandresena dia mankamin'ny miaramila Nazi sy ny fahaizany >
< start="599.3" dur="4.49"> manantona sy hikasika olona hatramin'ny 1000 metatra miala tsara. >
< start="603.79" dur="4.55"> Farany, manana tombony ara-batana ara-batana sy ara-tsaina ny fitsidihanay ny dianay manao dia lavitra >
< start="608.34" dur="4.57"> nandritra ny taonany dia nandany tamin'ny fandaharam-piofanana nasionalista Hitler Tanora, ary nanana tombony >
< start="612.91" dur="5.12"> tao anaty afo lavitra be dia be ny fahazoana marim-pototra sy ireo karazana basy K98k. >
< start="618.03" dur="4.48"> Saingy amin'ny faritra hafa rehetra dia manjaka ny miaramila amerikana maoderina, isaorana ny fivoarana >
< start="622.51" dur="4.71"> amin'ny fandaharam-panofanana nandritra ny 80 taona lasa ary nanatsara ny fitaovana maoderina. >
< start="627.22" dur="4.54"> Angamba tsy mitovy hevitra ianao na- iza amin'ireo roa heverinao fa mety handresy amin'ny iray tokana >
< start="631.76" dur="1.19"> miady amin'ny fahafatesana? >
< start="632.95" dur="3.55"> Ampahafantaro anay ao amin'ny fanehoan-kevitra, ary ankehitriny fa amin'ny faran'ny farany ianao, maninona raha mitandrina hatrany >
< start="636.5" dur="4.93"> fety mandeha amin'ny fipihana ilay horonan-tsary eto, na angamba aleonao hijery ity iray ity eto >
< start="641.43" dur="1"> fa tsy ?! >
< start="642.43" dur="3.13"> Mandehana haingana ary tsindrio ny iray, tsy sahala amin'ireo mpiady aminay ankehitriny - tsy ho very ianao! >